Mas'uuliyiinta Hay'ada Sanduuqa Caafimaadka Dunida oo la kulmay Ra'iisul Wasaare Geedi
Mas'uuliyiinta Hay'ada Sanduuqa Caafimaadka Dunida oo kula kulmay Raiisul Wasaare Geedi magaalada Brussels ee dalka Belgium WHF waa urur caalami ah oo ka shaqeeya arrimaha la xariira wanaajinta caafimaadka ee beesha caalamka, (Octimal Health) ahmiyad gaar ahna siiya arrimaha la xariira wacyigalinta bulshada ee caafimaadka isla markaana haatan ku howlan barnaamijyo la xariira horumarinta adeegyada caafimaadka ee Soomaaliya ayaa ay Masuuliyiintiisa gaar ahaan Gudoomiyaha ururka Prof. Emar Vogalaar iyo kaaliyaha hayada ee Soomaaliya Prof. Cabdulqaadir Ruumi ay iyagu hore u tageen booqasho shaqo dalka Soomaaliya magaalada Muqdisho bishii Abril 2005 tii, si ay wada hadal ula yeeshaan howl wadeenada caafimaadka ee ka howl gala magaalada Muqdisho.
Intii ay mauuliyiintaasi ku sugnaayeen magaalada Muqdisho waxay casharo ku saabsan nafaqaynta (Nutrition) ka bixiyeen jaamacada Banaadir ee Muqdisho sidoo kale masuuliyiintu waxay booqasho ku tageen qaar ka mid ah cusbitaalada magalaada Muqdisho sida cusbitaalka Madiina, Xayaat, xarunta SOS iyo xarunta caafimaadka indhahah ee Al-Nuur, sidoo kale waxay masuuliyinta hay'ada caafimaadka dunida heshiis la samaysteen jaamacada Banaadir heshiiskaasoo ahaa :Memorendum of Understanding.
Haddaba iyado laga tusmo qaadanaayo qorshaha hayadda caafimaadka Dunida waxay masuuliyiinta hayada Prof. Emar Vogalaar iyo Prof. Ruumi booqasho sharaf ugu tageen Raiisulwasaaraha DFKMG ah Soomaaliya oo haatan ku sugan magaalada Brussels, waxayna kala hadleen arrimo la xariira horumarinta adeegyada caafimaadka ee Soomaaliya.
Wuxuuna Ra'iisul Wasaarha Soomaaliya Prof. Geedi soo dhoweeyey howlaha ururka sanduuqa caafimaadka dunida uu ka wado dalka Soomaaliya.
Sidoo kale Ra'iisul.Wasaaraha wuxuu cadeeyey in maanta lagu howlan yahay dib u dhiska dalka Soomaaliyeed, wuxuu kaloo intaa ku daray in dalka Soomalaiya ay ka jirana abaaro baan sidaas darteedna loo baahan yahay in la gargaaro dadka Soomaaliyeed ee dhibaataysan. Sidoo kale wuxuu Ra'iisul Wasaaraha ahmiyado gaar ah siyey barnaamijyada la xariira nafaqaynta kuwaasoo uu ku tilmaamay in ay lagama maarmaan u yihiin nolosha biniaadamka.
Gudoomiyaha Hayada Sanduuqa Caafimaadka wuxuu sheegay ama uu xusey in hayadiisu ka shaqayn doonto howlaha la xariira horumarinta caafimaadka ee Soomaaliya. Ugu danbayn kulanku wuxuu ku dhamaaday jawi wanaagsan oo is afgarad ah.